के छ डा. शेखर कोइरालाको जन्म कुण्डलीमा ? बन्लान त पार्टी सभापति ? — Motivatenews.Com
काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको जनमत राम्रो छ । पार्टी पोर्टफोलियो जे भएपनि उनको चर्चा देशभर छ ।
डा. कोइरालाले आफू नेपाली काँग्रेसको आगामी पार्टी सभापति भनेर घोषणा गरिसकेका छन । त्यही अनुरुप उनी आउने आगामी अधिवेशनका लागि उनको डौडधुप चलिरहेको छ । आगामी चौधौं महाधिवेशनमा अहिलेका वर्तमान पार्टी सभापति शेर बाहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहले पनि आफूलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन । तर कार्यकर्ताले कोइरालाको कार्यशैली र नेतृत्व क्षमताका कारण अढि रुचाउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
शेखर कोइरालाको लिगेसी पनि भएकाले कार्यक्रर्ताले साथ दिने धेरैको आँकलन छ । ७१ बर्षिया कोइराला जवान जसरी दौडधुप गरिरहेका छन । जील्ला जील्लाका कार्यकर्तामा भेटघाट र जन सम्पर्क बडाउदै लगेका छन । समय सापेक्ष राजनैतिक टिप्पणी र वर्तमान नेकपाको सरकारको प्रखर आलोचकको रुपमा पनि शेखरलाई देख्न सकिन्छ । कोइराला भएर पनि ‘विरासत मात्रै सबै थोक होइन’ भन्ने उनी नेतृत्व क्षेमता पनि देखान तल्लिन छन ।
कोइरालाले पाका नेताहरुको अनुभव र युवाको उर्जालाई मिलाएर लाने रणनीतिमा काम गरेकाले देशभरका कार्यकर्ताले साथ दिएको बुझिन्छ । उनको मिहिनेत र लगनशिलताले शिखर चुमेको छ नै । मिहिनेत र लगनशिलतामा भाग्य पनि जोडियो भने सफलताको शिरमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन । जसर्थ आज हामी कोइरालाको जन्म कुण्डली केलाउँदै छौं । उनको भाग्यरेखा कस्तो छ ? के उनी पार्टी सभापतिमा विजयी हुन सक्छन् ? कस्तो छ कुण्डली ? यस विषयमा चर्चा गर्दैछौं ।
लखेक विश्लेषण ओम आचार्य
शेखर कोइरालाको कुण्डली
कोइराला मकर लग्नको जातक हुन । उनको नक्षत्र श्रवण हो ।
मकर लग्नमा सूर्य अष्टमेष भएकोले अशुभ छ । सूर्य शनिको सत्रु भएका कारणले यदि असुभ ग्रहको युतीमा कहिले कही मारक पनि हुन्छ । सूर्यमा अष्टमेष दोष पनि छैन् । सूर्य स्वगृह भएको हुदा सूर्यले विपरित राजयोग निर्माण गरेको छ । यस्तो जातक धनि तर अभिमानी हुन्छ । सूर्यले पराक्रमी साहास, दृढ निस्चयका साथ सत्रु नाशमा सक्षम रहन्छन । सूर्य र शनिको योगबाट अचानक दुर्घटनाको योग देखिन्छ।
चन्द्रमा सप्तमेष हो । मारक स्थानको स्वामी छ तर झिनो दोष छ । किन भने चन्द्र शनिसँग सम भाव राख्छ । चन्द्र लग्नमै गर्नाले सुन्दर आकर्षक । सातौ दृष्टी सप्तम भावमा रहेको हुदा पित्निका विषयमा मिश्रित फल मिल्छ ।
मंगल चतुर्थेस र राज्येस हुनाले मकर लग्नमा त्यती शुभ मानिन्दैन । यो मगल मारकेस कै परिणाम देखाउछ ।
मंगल यहाँ आफ्नै गृहमा जान अभिलाषी छ र दिग्बली छ । मंगलले यहाँनेर कुल दिपक योगको निर्माण गरेको छ । आफ्नो परिवारको कुटुम्बको नाम अगाडी बडाउनाले राज्यबाट सम्मान पाउने अवसर छ ।
बुध षष्टेस र भाग्येस छ । शनिको मित्र रहेको बुध राजयोग कारक ग्रह र शुभ फल दिने देखिन्छ । नवम भावमा कन्याराशीमा उच्च बुधले उच्च विधा, उच्च राज्यपद र व्यापारसमेतमा सफलता मिल्छ । पिताको सम्पति प्राप्त हुन्छ ।
बुधको पराक्रम भावमा दृष्टी रहेको हुदा पुरुषार्थी महत्वकांक्षी हुदै महत्वकांक्षापूर्ण हुदै जाने हुन्छ ।
वृहस्पति मंकर लग्नमा तृतियेष र व्ययेस हुनुको कारण वृहस्पती अशुभ फलदायक र परम पार्पी छ र कुम्भ राशीको द्वितिय भावको वृहस्पति धन संग्रह र कुटुम्बमा समस्या हुन्छ । गुप्त सत्रुहरु धेरै रहन्छन
शुक्र पञ्चमेष र राज्येस छ । यो अत्यन्त राजयोगकारक रहेको छ । शुक्र शनिको मित्र भएकोले शुभ फल दिन्छ । सत्रु गृह कर्कमा स्थित शुक्र सत्रुता कारण कुलदिपक योग र पद्मसिहांसन योग बन्छ । अरुबाट मान सम्मान प्राप्त हुन्छ । थम्हा चाहान्छन यस्तो जातक । मकर राशी अर्थात लग्नमा दृष्टी रहेको हुदा परिश्रमकोे फल मिल्ने पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग छ ।
मकर लग्नमा शनि स्वयम् मारकेश भएर पनि मारकेशको काम गर्दैन । यो द्वितियेस र लग्नेस पनि हो । शनिले अधिक परिश्रम गर्ने गराउछ र झनझटहरुको सामना गराउछ । अचानक दुर्घटनाको योग । आर्थिक शाररिक कमजोर गराउछ ।
राहु जातकको लागि राजयोग कारक भएर आएको छ । साथै लग्नेस शनिसँग सम भाव राख्छ । मिन राशीको राहु निच भएतापनि तेश्रो घरको राहु मकर लग्नमा राजयोग निर्माण गर्छ । राहुले पराक्रमी बनाउछ तर सहोदर भाइ बैनीमा चिन्ता गराउछ । अन्तत यस्तो जातक सफल हुन्छन ।
केतु ग्रहले नास्तिक बनाएपनि यसस्वी बनाउछ । मकर लग्नमा केतु शुभ मानिन्छ । मकर राशी केतुको मुल त्रिकोण राशी हो । निचको केतु भएतापनि कठिनाइको बावाजुद अन्तत सफलता मिल्छ । बुधसँगको युतीले पराक्रमी बनाउछ ।
माथि मैले नवग्रहको सामान्य विश्लेषण गरे । अहिले जातकमा शुक्रको महादशा र संकटा चलिरहेको छ । शुक्र मैले सुरुमै भनेको छु लग्नेसको मित्र हुदै यो सुक्र कुल दिपक योग र पद्मसिहांसन योग बनेको हुदा अहिल्यै पद प्राप्ति हुने र अत्यन्त सरिरमा उर्जा देखिने यही शुक्रले गर्दा हो ।
अर्को तर्फ सूर्यको विपरित राजयोग निर्माण र मंगलले दिग्बली हुदै कुलदिपक योग बनेको छ । राहु पनि राजयोग भएर आएको छ । यो कुन्डलीमा जातकको शुक्र, सूर्य, मंगल र राहु सबैले राजयोग निर्माण गर्छन् ।
जातक राजनीतिकमा अगाडि बढ्ने योग यही शुक्रको महादशामै हुन्छ । र राहु राजनीतिक कारक ग्रह भएकोले राजनीतिमा सफलता मिल्छ । सूर्य राज्य कारक ग्रह र शुक्र राज्येश र पंचमेष भएको हुदा र मंगलले डा. कोइरालाई उर्जा मिलेको छ ।
संकटामा सिध्दान्तको अन्तर रहेको हुदा शुक्रको महादशामा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गराउछ। यही समयमा जातक सभापति हुने योग देखिन्छ।
जातकले पन्ना र हिरा धारण गर्नु श्रेयकर देखिन्छ । अहिले जातकमा साढेसाती चलिरहेको छ । शनिको उपाय गर्नु राम्रो मानिन्छ । साढेसाती चलेको हुदा दशाअवधी भर निलम धारण गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ ।